Travel - The Geek Text
■၁၉၉၉ ကိုဆိုဗို စစ်ပွဲမှာ ဆွိတ်ရှော ကလပ် HMS စပလန်းဒစ် ဟာ Tomahawk missile ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ ပထမဆုံး ဗြိတိသျှ ရေငုပ်သင်္ဘော ဖြစ်ခဲ့
February 9, 2022 February 9, 2022 The Geek
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■၁၉၉၉ ကိုဆိုဗို စစ်ပွဲမှာ ဆွိတ်ရှော ကလပ် HMS စပလန်းဒစ် ဟာ Tomahawk missile ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ ပထမဆုံး ဗြိတိသျှ ရေငုပ်သင်္ဘော ဖြစ်ခဲ့ ၁၉၉၅ မှာ အမေရိကန်က U.K ရဲ့ နျူကလီးယား အတက်ခ် ရေငုပ်သဘ်ောမှ တော်ပီဒိုလန့်ခ်ျ တွေအတွက် Tomahawk missile ၆၅ စင်း ကို ရောင်းဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ပထမဆုံးဒုံးကျည်တွေကို ၁၉၉၈ နိုဝင်ဘာလမှာ ရောင်းချပေးခဲ့ပြီး အစမ်းပစ်ခတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခု အခါမှာတော့ အက်စတု ကလပ်အပါအဝင် တော်ဝင်ရေတပ်ရဲ့ ရေငုပ်သဘ်ောအုပ်စု ယာဉ်အားလုံးမှာ tomahawk ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ၁၉၉၉ ကိုဆိုဗို စစ်ပွဲမှာ ဆွိတ်ရှော […]
■ပိုလန်နိုင်ငံ၊ဇက်ကရိုပိန်းမြို့မှ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေခဲဝင်္ကပါ
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■ပိုလန်နိုင်ငံ၊ဇက်ကရိုပိန်းမြို့မှ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေခဲဝင်္ကပါ ဒီလိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ မှာစတင်ပေါ်လာပြီး ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုရင် ပိုလန်နိုင်ငံကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုသေချာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဇက်ကရိုပိန်းမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေခဲပြင်အားကစားနည်းတွေကိုသဘောကျတဲ့ပရိသတ်တွေက ဒီနာမည်ကို ရင်းနှီးနေတာက မဆန်းပါဘူး။ ဇက်ကရိုပိန်းဆိုတာက ပိုလန်နိုင်ငံရဲ့ ဆောင်းမြို့တော်ပါ။ ဒါ့ကြောင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေခဲဝင်္ကပါဟာ ဒီနေရာမှာ ဆောက်ထားတာ သာမန်ဖြစ်ပြီး စတုရန်းမီတာ ၂,၅၀၀ ကျယ်ဝန်းတဲ့ ဝင်္ကပါကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် တစ်လလောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ တလျှောက်လုံးမှာတော့ ရေခဲတုံး ၆၀,၀၀၀ ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ လုပ်သား အယောက် ၅၀ နှင့်တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ ဒီ ရေခဲဝင်္ကပါကိုပိုပြီး ထူးခြားစေတာက ၁၆ မီတာအမြင့်ရှိတဲ့ ရဲတိုက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ ဝင်ရလောက်အောင်ကံကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ နတ်သမီးပုံပြင်ထဲရောက်နေတယ်လို့တောင် ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဘာလို့လဲဆိုတော့အတော်ဆုံးရေခဲပန်းပုပညာရှင်တွေက ရဲတိုက်ကြီးကို အလှဆင်တဲ့နေရာမှာ ပါဝင်ထားလို့ပါ။Ref:youtubeTrans:thegeektext […]
■ဘယ်ဂျီယံနဲ့ နယ်သာလန်ရဲ့ နယ်စပ်ဟာ တော်တော်လေး ရှည်လျား
October 29, 2021 October 29, 2021 The Geek
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■ဘယ်ဂျီယံနဲ့ နယ်သာလန်ရဲ့ နယ်စပ်ဟာ တော်တော်လေး ရှည်လျား ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက် ဘာလာဟားတော့ခ် မြို့ငယ်လေးဟာ ကမ္ဘာ အံဖွယ်ထဲမှာ ပါဝင်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဂီဇာပိရမစ်တွေလောက် မထူးဆန်းပေမယ့်လည်း သူ့မှာလည်း သူ့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့သူရှိပါတယိ။ အကြောင်းရင်းကတော့ ဘယ်ဂျီယံနဲ့ နယ်သာလန်ရဲ့ နယ်စပ်ဟာ တော်တော်လေး ရှည်လျားလို့ပါ။ ဘယ်ဂျီယံ မြို့ရဲ့တစ်ချို့အပိုင်းတွေက ဘယ်ဂျီယံ နယ်စပ်ကနေ ၅ ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ နယ်သာလန်ပိုင်နက်နယ်မြေထဲ ရောက်နေတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ နယ်မြေတစ်ခုရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက အခြားနယ်မြေပိုင်နက်ထဲကို လုံးဝရောက်နေပြီး ကာရံထားတာမျိုးကို နယ်နိမိတ်ခြားပိုင်နက်လို့ ခေါ်တာပါ။ နည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးတာပေါ့။ အဲ့ထက်ပိုဆိုးတာက တခြားနယ်မြေထဲရောက်နေတဲ့ ဘယ်ဂျီယံ အပိုင်းထဲမှာ ဒတ်ချ် ရဲ့ပိုင်နက်လည်းရှိနေတာမျိုးကို အဆင့်ဆင့်နယ်နိမိတ်ခြားပိုင်နက်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီး တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဘာလာဟားတော့ခ် ကတော့တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာလို့ပြောရမှာပါ။ ၁၈၄၃ခုနှစ် မှာ […]
■ရေကူဝတ်စုံထက် ကြက်ဥယူသွားဖို့ပိုသင့်တော်သော bogoria lake
October 28, 2021 October 28, 2021 The Geek
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■ရေကူဝတ်စုံထက် ကြက်ဥယူသွားဖို့ပိုသင့်တော်သော bogoria lake ဘယ်ဂိုရီးယားရေကန်ကတော့ ကန်ညာနိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီး သူတို့ရဲ့ရေပူစမ်းတွေကြောင့် နာမည်ကြီးတာပါ။ ဒီနေရာကိုလာကြတဲ့ ခရီးသွားတွေက ပုံမှန် ရေကူးဝတ်စုံတွေယူလာကြတာမဟုတ်ပဲ ကြက်ဥတွေယူလာကြပါတယ်။ ဘာလို့များလဲ။ ဒါဟာရိုးရှင်းပါတယ်။ ရေကန်ထဲက ရေဟာ ရေဆူမှတ် ၁၁၀ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်စ် အထက်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာဆိုရင် ပရိသတ်ကြီးက ပန်းရောင် ကြိုးကြားအုပ်တွေတောင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ခရီးသွားတော်တော်များများကိုဆွဲဆောင်နိုင်တာလည်း မဆန်းပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ သင်ဟာ ရေဆူနေတဲ့ကန်မှာ ဟင်းလျာတွေကိုချက်ပြုတ်စားသောက်ရင်း ရေကန်ရဲ့ အရိုင်းဆန်တဲ့အလှကိုရှုစားနိုင်ပါတယ်။Ref:youtubeTrans:thegeektext zawgyi TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္လုံးဝခြင့္မျပဳပါ။ ■ေရကူဝတ္စုံထက္ ၾကက္ဥယူသြားဖို႔ပိုသင့္ေတာ္ေသာ bogoria lake ဘယ္ဂိုရီးယားေရကန္ကေတာ့ ကန္ညာနိုင္ငံမွာတည္ရွိၿပီး သူတို႔ရဲ့ေရပူစမ္းေတြေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးတာပါ။ ဒီေနရာကိုလာၾကတဲ့ ခရီးသြားေတြက ပုံမွန္ ေရကူးဝတ္စုံေတြယူလာၾကတာမဟုတ္ပဲ ၾကက္ဥေတြယူလာၾကပါတယ္။ ဘာလို႔မ်ားလဲ။ […]
October 23, 2021 October 24, 2021 The Geek
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■လကမ္ဘာကိုသွားရောက်လည်ပတ်သလိုခံစားရစေမည့် ကမ္ဘာမြေမှပြည်နယ်တစ်ခု ဒါကတော့နဗားဒါးပြည်နယ်ပါသင်ဟာလမျက်နှာပြင်ပေါ်ကချိုင့်ခွက်များကိုမြင်ဖူးချင်ပါကသွားသင့်သောနေရာပဲဖစ်ပါတယ်။အကြောင်းမှာတော့ထိုနေရာ၌ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့်လမျက်နှာပြင်နှငိ့တူသည့်ချိုင့်ခွက်များရှိသောကြောင့်ဖြစ်ကာဒီနေရာမှာပဲနယူးကလီးယားပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သာဧရာမအပေါက်ကြီးလည်းရှိပါတယ်။ ဆီဒန်ချိုင်ခွက့်ရဲ့အကျယ်ဟာအလွန်ကြီးမားပါကာအချင်း12795ပေသိုမဟုတ်မိတာ390ရှိပြီးအနက်328ပေသို့မဟုတ်မီတာ100ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်Apophis(အဖေါဖစ်စ်)ဥက္ကာခဲ့နဲ့အရွယ်အစားအတူတူဖြစ်ပါတယ်။50ခုနှစ်များတွင်အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်များမှနယူးကလီးယားဗုံးများဟာသတ္တုတွင်းနဲ့ကျောက်တူးဖော်ရေးများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အင်ဂျီနီယာများဟာချိုင့်ဝှမ်းကြီးများပြုလုပ်ပြီး467ပေါင်သို့မဟုတ်212ကီလိုလေးသောပေါက်ကွဲအား104ကီလိုတန်နယူးကလီးယားဗုံးများထည့်ကာဖောက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။ဖောက်ခွဲမှုကြောင့်သဲနှင့်ကျောက်တုံးများဟာအထပ်30တိုက်အမြင့်ခန့်ရေပန်းကဲ့သို့ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးထို့အချိန်အတွင်း၌ပင်မြေကြီးတန်11သန်းခန့်လည်းကီလိုပေါင်းများစွာပြန့်ကျဲခဲ့ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုပြီးသောအခါတွင်လည်းဖုန်လုံးကြီးများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးရေဒီယိုသတ္တိကြွအမှုန်များဟာအမေရိကန်ပြည်နယ်လေးခုထိသက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်တွင်ပေါက်ကွဲရာနေရာ၌ရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဟာXrayunit500ထိတိုးလာခဲ့ပြီးဤနည်းဖြင့်1962ခုနှစ်၌လူလုပ်ဆီဒန်ချိုင့်ခွက်ကြီးဖြစိပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ယနေ့မှာတော့ဒီနေရာဟာဘေးကင်းလုံခြုံပြီးနှစ်စဥ်ခရီးသွားတစ်သောင်းခန့်လာရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ်။လနှင့်ခပ်ဆင်ဆင်လည်ပတ်ရာနေရာတစ်ခုပဲဖြစိပါတယ်။Ref:youtubeTrans:thegeektext zawgyi TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္လုံးဝခြင့္မျပဳပါ။ ■လကမၻာကိုသြားေရာက္လည္ပတ္သလိုခံစားရေစမည့္ ကမၻာေျမမွျပည္နယ္တစ္ခု ဒါကေတာ့နဗားဒါးျပည္နယ္ပါသင္ဟာလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚကခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားကိုျမင္ဖူးခ်င္ပါကသြားသင့္ေသာေနရာပဲဖစ္ပါတယ္။အေၾကာင္းမွာေတာ့ထိုေနရာ၌ေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္လမ်က္ႏွာျပင္ႏွငိ့တူသည့္ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ကာဒီေနရာမွာပဲနယူးကလီးယားေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့သာဧရာမအေပါက္ႀကီးလည္းရွိပါတယ္။ ဆီဒန္ခ်ိဳင္ခြက့္ရဲ့အက်ယ္ဟာအလြန္ႀကီးမားပါကာအခ်င္း12795ေပသိုမဟုတ္မိတာ390ရွိၿပီးအနက္328ေပသို႔မဟုတ္မီတာ100ျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာအားျဖင့္Apophis(အေဖါဖစ္စ္)ဥကၠာခဲ့နဲ႔အရြယ္အစားအတူတူျဖစ္ပါတယ္။50ခုႏွစ္မ်ားတြင္အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွနယူးကလီးယားဗုံးမ်ားဟာသတၱဳတြင္းနဲ႔ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးမ်ားကိုပိုမိုလြယ္ကူေစနိုင္ေၾကာင္းအႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္အင္ဂ်ီနီယာမ်ားဟာခ်ိဳင့္ဝွမ္းႀကီးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး467ေပါင္သို႔မဟုတ္212ကီလိုေလးေသာေပါက္ကြဲအား104ကီလိုတန္နယူးကလီးယားဗုံးမ်ားထည့္ကာေဖာက္ခြဲခဲ့ပါတယ္။ေဖာက္ခြဲမႈေၾကာင့္သဲႏွင့္ေက်ာက္တုံးမ်ားဟာအထပ္30တိုက္အျမင့္ခန္႔ေရပန္းကဲ့သို႔ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီးထို႔အခ်ိန္အတြင္း၌ပင္ေျမႀကီးတန္11သန္းခန္႔လည္းကီလိုေပါင္းမ်ားစြာျပန္႔က်ဲခဲ့ပါတယ္။ ေပါက္ကြဲမႈၿပီးေသာအခါတြင္လည္းဖုန္လုံးႀကီးမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေရဒီယိုသတၱိႂကြအမႈန္မ်ားဟာအေမရိကန္ျပည္နယ္ေလးခုထိသက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ထိုအခ်ိန္တြင္ေပါက္ကြဲရာေနရာ၌ေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ဟာXrayunit500ထိတိုးလာခဲ့ၿပီးဤနည္းျဖင့္1962ခုႏွစ္၌လူလုပ္ဆီဒန္ခ်ိဳင့္ခြက္ႀကီးျဖစိေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ယေန႔မွာေတာ့ဒီေနရာဟာေဘးကင္းလုံျခဳံၿပီးႏွစ္စဥ္ခရီးသြားတစ္ေသာင္းခန္႔လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါတယ္။လႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္လည္ပတ္ရာေနရာတစ္ခုပဲျဖစိပါတယ္။Ref:youtubeTrans:thegeektext
October 23, 2021 October 23, 2021 The Geek
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■အကျိုးသက်ရောက်မှုမြင့်သော မီးပူပူဖြင့်နှိပ်နယ်ခြင်း ထိုင်းလူမျိုးတွေဟာ နှိပ်နယ်မှု အရာမှာ ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ ဒီကိစ္စကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက လူအများဟာ သိကြပါတယ်။ခရီးသွားပြည်သူအများစုဟာ ဒီကုထုံးနည်းကို ခံစားကြဖို့အတွက် နှစ်စဥ် ထိုင်းနိုင်ငံကို လာလည်ကြတာပါ။ မီးနှင့်နှိပ်နယ်တာဟာ အနာကျင်ဆုံး အရာတွေထဲက တစ်ခုပဲဖြစ်ကာ ဒီနာကျင်မှုဟာ အပိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ကို မီးလောင်ခံရတာနှင့်တူပြီး အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့မီးဖြင့် နှိပ်နယ်ခြင်းဟာ အထဲမှာ ဆီနှင့်ရေထည့်ထားတဲ့ ဘူးလေးနှင့် မီးတွေပါရှိတဲ့ သတ္တု ဘူးလေးပါရှိပါတယ်။ ကုထုံးကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မီးဖိုကို သံပန်းကန်ပြားလေးနဲ့ဖုံးထားပြီး အနှိပ်သည်ဟာ သူတို့ခြေထောက်ကို ဆီဆွတ်ကာ မီးပေါ်ကို တိုက်ရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အနှိပ်သည်ဟာ သံပြားပေါ်ကို နင်းပြီးမှ ခြေထောက်ပူပူကို ဧည့်သည့်ရဲ့အလိုရှိရာ နေရာကို နင်းပြီးနှိပ်နယ်ပေးပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းဟာ ရေဖြင့် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ အထူး […]
October 21, 2021 October 21, 2021 The Geek
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■သကြားလုံးမပေးရင် ဘာသာရေးဓလေ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသည်ဆိုသော ဒီနိုင်ငံမှာတော့ အနောက်တိုင်း ပုံစံ ဟောလိုးဝင်းက အရမ်းကြီး ခေတ်မစားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆာဒီးနီးယား(Sardinia) နယ်ရဲ့ ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုမှာတော့ အဲ့လိုပုံစံတူမျိုး ဟောလိုးဝင်းပွဲကို ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီကျွန်းလေးပေါ်က ကလေးတွေက ဟောလိုးဝင်းဆိုရင် ‘ဝိဉာဉ်တွေ အတွက် ငါ့ကို တစ်ခုခုပေးပါ’ တို့၊ ငါက ဝိဉာဉ်တွေအတွက်လာတာပါ’ ၊ ‘ငါကဆုံးပါးပြီးသားသူပါ’ ဆိုတာမျိုး ထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတွေ ပြောပြီး သကြားလုံးလေးတွေ လိုက်တောင်းတတ်ပါတယ်၊ ဒီလိုစကားတွေ ပြောတယ်ဆိုကြတာက ကလေးတွေဟာ ဆုံးပါးသူတွေကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ အဲ့လိုသကြားလုံးလေးတွေ တောင်းတာကို မပေးဘူးဆိုတာကတော့ ဝိဉာဉ်တွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရေးဓလေ့ကို မထီမဲ့မြင်ပြုတာပါပဲ။ အဲ့တာကြောင့် အဲ့ရာသီဆို ကလေးတွေ သကြားလုံးတွေ အများကြီး ရကြတာပေါ့။ လူသိများကြတဲ့ ရွှေဖရုံသီးမှာ […]
■လမ်းမပေါ်ထွက်၍လမ်းလျှောက်နေသော ကြီးမားသောအရုပ်များ Marionette စီတန်းပြပွဲ
October 20, 2021 October 20, 2021 The Geek
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■လမ်းမပေါ်ထွက်၍လမ်းလျှောက်နေသော ကြီးမားသောအရုပ်များ Marionette စီတန်းပြပွဲ ကနေဒါက Montrealမြို့မှာ သူတို့ရဲ့ ၃၇၅နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကိုဘယ်လိုကျင်းပခဲ့လဲကြည့်လိုက်ရအောင်?ပြင်သစ် royal deluxe ပြဇာတ်ရုံပရောဂျက်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ရုပ်သေးရုပ်တန်းကြီးက လမ်းမပေါ်မှာ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အခုလိုကြီးမားတဲ့အရုပ်ကြီးတွေကိုမြို့လမ်းမပေါ်မှာတွေ့မြင်ရတာက လေးစားစိတ်နဲ့ ကြောက်ရွံစိတ်နှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတာပါ။ရုပ်သေးတစ်ရုပ်ကိုလူဒါဇင်ပေါင်းများစွာက ထိန်းချုပ်ရတာပါ။စဥ်းစားကြည့်ရုံနဲ့ ဒီပွဲအတွက်အားဘယ်လောက်စိုက်ထုတ်ရတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ Royal deluxe ပြဇာတ်ရုံက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကတည်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။၉၀ ခုနစ်တွေကစပြီးတမူထူးခြားတဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ တကယ့်ကိုအောင်မြင်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်းသူတို့အဖွဲ့ဟာ မတူညီတဲ့ တိုင်း နိုင်ငံတွေပါလှည့်လှည်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး ပရိသတ်ကိုအမြဲအံအားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။တူညီတဲ့ပြင်သစ်ပြဇာတ်ရုံတစ်ခုက အလားတူစီတန်းပြပွဲတစ်ခုကို အဂ်လန် လီဗာပူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပြပွဲမှာ အရုပ်တွေက ၁၅ မီတာမြင့်ပြီး ငါးထပ်အိမ်လောက်ရှည်လျားခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၂ခုနစ်လီဗာပူးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီ ရုပ်သေးပြပွဲက မြို့သမိုင်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးပွဲတော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဧည့်သည်ပေါင်း ၈၀၀၀၀၀ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး အမြတ်ငွေတွေက မြို့ရဲ့ ဘဏ္ဍရေးကိုဖြည့်စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက royal deluxe က Beatles ကိုပြန်ခဲ့ပီး။မွေးဌာနေကိုတော့၂၀၁၄နဲ့ ၂၀၁၈ […]
■သဲခုံပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရင်း ပိုက်ဆံလည်းသုံးစွဲစရာမလိုသည့် Burning Man festival
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■သဲခုံပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရင်း ပိုက်ဆံလည်းသုံးစွဲစရာမလိုသည့် Burning Man festival အနုပညာပွဲတော်။Burning Man festival ကိုသင်ကြားဖူးပါသလား?လူသန်းပေါင်းများစွာကဒီပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ဖို့စိတ်ကူးယဥ်ကြပါတယ်။ဒီပွဲတော်ကို Nevada ပြည်နယ်ရဲ့ Black Rockကန္နာရမှာနှစ်စဥ်ကျင်းပလေ့ရှိပြီး ပွဲစီစဥ်သူတွေကတော့ဒီနေရာက မိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ဖော်နိုင်မဲ့နေရာလို့ဆိုကြပါတယ်။ပွဲတော်အတွင်းမှာလူတွေက သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ အနုပညာလက်ရာတွေကိုတွေ့နိုင်မှာပါ။ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့လူတွေလည်း သင့်လို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သဲခုံပေါ်လမ်းလျှောက်နေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက Mark Zuckerberg နဲ့ Elon Musk. တို့လာရောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ပွဲတော်ရက်တွေအတွင်း လာရောက်တဲ့သူတွေကို ဒေသခံလို့ခေါ်ကြပြီးချစ်ချစ်တောက်ပူနေတဲ့နေရောင်အောက်က အဲ့ဒီကန္နာရက သူတို့ရဲ့ ယာယီအိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာချဲ့ကားပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီပွဲတော်မှာ ပိုက်ဆံလုံးဝမသုံးရပါဘူး။အဲ့တာကထုံးစံပါပဲ။စကားစမြည်ပြောခြင်းနဲ့လက်ဆောင်တွေကိုလဲရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သောက်စရာတစ်ခုရရှိဖို့ အဖျော်ဆရာကို သင့်ဘဝရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုပြောပြရပါတယ်။ ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်လို့ရတာကကော်ဖီနဲ့ရေခဲပဲရှိတာပါ။ယာယီတဲစခန်းတွေမှာလည်း logo တွေထားခွင့်မရှိပါဘူး။ဒီပွဲတော်ရဲ့အဓိကကျတဲ့အရာကတော့ လောင်ကျွမ်းနေတဲ့သစ်သားရုပ်ထုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲတော်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းက ၁၉၈၆မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အနုပညာသမားသူငယ်ချင်းတစ်စုကဆန်ဖရန်စစ်စကိုကကမ်းခြေတစ်ခုမှာ စာခြောက်ရုပ်တစ်ရုပ်ကိုမီးရှို့ခဲ့ကြပါတယ်။လူတွေကအဲ့တာကြည့်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားကြတဲ့အတွက် သူတို့သူငယ်ချင်းတစ်စုကဂီတပွဲတော်တစ်ခုလုပ်ဖို့အကြံဉာဏ်ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ Nevadaမှာရှိတဲ့ ကန္နာရမှာလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။Ref:youtubeTrans:thegeektext zawgyi TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္လုံးဝခြင့္မျပဳပါ။ ■သဲခုံေပၚမွာလမ္းေလၽွာက္ရင္း […]
■အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ဝတ်စုံများကို မြင်ကြရမဲ့ ပွဲတော်တစ်ခု
TheGeekText.com Copyright©2021 ကူးယူဖော်ပြခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ■အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ဝတ်စုံများကို မြင်ကြရမဲ့ ပွဲတော်တစ်ခု Mardi Gras. ချီတက်ပွဲ။ပြင်သစ်ဘာသာစကားကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး Fat Tuesdayလို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ဒီပွဲတော်ကိုတော့ New Orleans မှာ ၁၇၈၁ခုနစ်ကတည်းကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒါကဥရောပနဲ့ ဘာသာစကားအဆက်အနွယ်ရှိတာထက်ကိုပိုပါတယ်။ အလယ်ပိုင်းခေတ်မှာတောင် ဒီပွဲတော်က ဥရောပရိုးရာပွဲတော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပါ။Fat weekလို့ခေါ်တဲနောက်ဆုံးရက်မှာကျင်းပကြတာပါ။အမေရိကန်မှာတော့ Mardi Gras ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကရိုးရှင်းပါတယ်။ကိုလိုနီခေတ်မှာ ခေတ်သစ်မြောက်အမေရိကရဲ့ Louisiana ပြည်နယ်ကိုပြင်သစ်တွေက ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက ဒီဝတ်စုံအဆန်းအပြားတွေဝတ်ပြီးလှည့်လည်ကခုန်တဲ့ဓလေ့က ပြည်တွင်းယဥ်ကျေးမှုဆီ စိမ့်ဝင်လာခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင်အောင် ကျန်ရှိနေတာပါ။ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ၈၀၀၀၀၀ လောက်ဟာ ဒီပွဲတော်အတွက် New Orleans ကိုလာရောက်ကြပါတယ်။ဒီဝတ်စုံအဆန်းအပြားတွေနဲ့ပွဲတော်ကတစ်ရက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Fats Tuesday မတိုင်ခင် နှစ်ပတ်အလိုကတည်းက လမ်းမတွေပေါ်မှာ ကျင်းပနေကြပါပြီ။ဒီMardi Gras ပွဲတော်ရဲ့ထူးခြားချက်က အရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ဝတ်စုံတွေပါပဲ။ ဒီပွဲတော်ရဲ့ရိုးရာအရောင်က စိမ်းဝါရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်း တခြားအရောင်မျိုးစုံကိုလည်း အရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ဒီပွဲမှာတွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။လမ်းပေါ်မှာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းက နွေဦးဝင်ပြီဆိုတာကိုပြသနေပြီး လည်ဆွဲဘယက်တွေကိုပစ်လွှတ်တတ်တဲ့ ရိုးရာဓလေ့တွေလည်းရှိပါတယ်။Ref:youtubeTrans:thegeektext […]